Mafana ririnina | NewsMada
Mamirifiry nyhatsiaka ao anatin’ity volana jolay ity. Efa nampahafantatra izany ny mpamantatra toetr’andro. Tsy toy izany kosa ny rivotra politika sy ny zava-misy iainana eto amin’ny firenena fa mafampana.
Mafana ny ady hevitra sy ny filokana eo amin’ny lalao baolina kitra iadiana ny tompondaka eran-tany. Samy manohana ny ekipany ary mivaivay ny fanapempoana ny mpifanandrina ao anatin’izany lalao sy filokana izany.
Etsy andaniny, ahitana taratra ny raharaha mafampana koa ny tontolon’ny fampianarana. Mbola mitohy ny fifanandrinan’nympitandro filaminana sy ny mpianatra eny Vontovorona. Mirefodrefotra ny baomba mandatsa-dranomaso. Samy tsy mitsitsy, na ny andaniny na ny ankilany.
Eo koa ireo mpampianatra mitokona mampikatso ny fampianarana tanteraka, amin’izao fotoana izao. Mitana ny teniny hatramin’ny farany ary tonga amin’ny fampikatsoana ny fanadinana sy ny sompatra amin’ny fanontana ny laza adina mihitsy izany, ankehitriny.
Efa ao anatin’ny fikononkononana fifidianana ho filoham-pirenena ihany koa ireo mpanao politika, ankehitriny. Na mangatsiaka aza ny andro, mafana kosa ho an’ireo mpanao politika ny fihazakazahana hahazoana seza. Mipoipoitra avokoa ireo kandidà ho filoham-pirenena. Samy manao izay ho afany izy ireo, hampisongadina azy amin’ireo mpifaninana aminy.
Eo amin’ny sehatry ny finoana, nakotroka ny fitsenana ny kardinaly vaovao ho an’ny mpino katolika ary mbola mitohy any Toamasina izany fandraisana azy amin’ny fomba manetriketrika izany.
Zava-dehibe loatra ho an’ny mpino katolika ny fahazoana kardinaly ho solon’ny papa eto Madagasikara ka nanao izay nety mihitsy izy ireo, nitsenana ity ray am-panahy ity.
Ankoatra ireo, malaza ary miteraka resaka mafana eny amin’ny fiarahamonina ny fivarotana ireo sekoly amin’ny olon-tsotra hataon’ny mahitahita. Toy ny valala voatango ireo mpianatra manoloana izany ka mipitrapitra miandry izay fivoaran’ny tantara eo fotsiny.
Mafampana anaty ririnina ny raharaha eto Madagasikara.